AV Uninstall Tools Pack v 2013.03 Full Version ( 102 MB ) - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home Uninstaller ဆော့ဖ်ဝဲများ AV Uninstall Tools Pack v 2013.03 Full Version ( 102 MB )
AV Uninstall Tools Pack v 2013.03 Full Version ( 102 MB )
Myanmar IT Helper at 11:05:00 AM Uninstaller, ဆော့ဖ်ဝဲများ,
Antivirus Programs တွေကို ဟိုဟာကောင်းနိုးနိုး သည်ဟာကောင်းနိုးနိုး နဲ့ လေ့လာစမ်းသပ်ရင်း နောက်ဆုံး မိမိ စက်နဲ့ မကိုက်ညီလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်, မလိုချင်တော့လို့ တခြား Antivirus Program ကိုပြောင်းသုံးချင်တဲ့အခါ လက်ရှိစက်ထဲက ရှိနှင့်ပြီးသား Antivirus Program ကို အရင်ဆုံး Uninstall လုပ်ပစ်ရပါတယ် .. ဒါပေမဲ့ ဘယ်လို Uninstallre ဆော့ဝဲလ် တွေသုံးပြီး ထုတ်ထုတ် အစ,အန လေးတွေ ကျန်နေတတ်ပြီး ထုတ်မရတာမျိုး , နောက်ထပ် Antivirus Program ကိုလည်း ထပ်ထည့်မရတာမျိုးတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ် .....။
အဲ့ဒီပြဿနာတွေကို ... ဒီ AV Uninstall Tools ကရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်..။ နောက်ဆုံး Version လေးပါ .. နာမည်ကြီး Antivirus အမျိုး အစားပေါင်း (၄၀) ကျော် ကို မိမိ ကွန်ပြူတာထဲကနေ အပြတ်ရှင်းထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ Software ကောင်းလေးမို့ ကွန်ပြူတာ အသုံးပြုသူတိုင်း ဆောင်ထားကြစေလိုပါတယ်....။
Autorun ဆိုတဲ့ .exe ဖိုင်လ်လေးကို Double Click ပြီးဖွင့်လိုက်ပါ။ စစချင်း Russian Language နဲ့ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်ဘက်မှာEnglishLanguageလေးကိုနှိပ်ပြီးLanguage ပြောင်းလိုက်ပါ။ ပြီးတော့ ကိုယ် Uninstall လုပ်ချင်တဲ့
Antivirus အမျိုးအစားကိုရွေးပြီး Uninstall ကိုနှိပ်ပါ။ ဒါဆိုရင် Antivirus ဟာ မိမိကွန်ပြူတာထဲကနေ အစ,အန မကျန်အောင် ပျက်သွားပါလိမ့်မယ်...။ နောက်ထပ် မိမိ အသုံးပြုလိုတဲ့ Antivirus Program ကိုလည်း အဆင်ပြေပြေနဲ့ Install လုပ်နိုင်ပါပြီ...။
Antivirus Program တွေ ဖြုတ်မရ , ထုတ်မရလို့ စိတ်ညစ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းများ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ...။
Windows 8 အတွက်ပါ ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်ခင်မျာ
AV Uninstall Tools Pack -afree package of tools designed to remove different antivirus programs. It includes tools for removing more than 30 anti-virus and anti spyware programs and firewalls.They are necessary in those cases when it is not possible to completely remove the antivirus program in the standard way, or in the process of removing errors. These utilities are completely removed all files, drivers, services and registry entries left behind by antivirus programs. These tools will be useful for those who often deals with reinstalling and configuring software. Please note that some utilities are not intended to be used as the primary means of uninstalling. Before using them, try to uninstall the standard way. Learn how to use each utility please read the Readme. Use For some utilities are present how to use English and / or Russian. Instructions are located in the “Readme”. If they are not, then follow the general guidelines: